अभागी अमेरिकी राष्ट्रपति पदका विजेता बाइडन जसको चुनाव जितेपछि शपथ लिने तयारी गर्दै गर्दा कार दुर्घटनामा उनको पत्नी नेलिया र छोरीको ज्यान गएको थियो ! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /International/अभागी अमेरिकी राष्ट्रपति पदका विजेता बाइडन जसको चुनाव जितेपछि शपथ लिने तयारी गर्दै गर्दा कार दुर्घटनामा उनको पत्नी नेलिया र छोरीको ज्यान गएको थियो !
4,1362minutes read
काठमाडौं । अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा जो बाइडेन निर्वाचित भएका छन्। रिपव्लिकन पार्टीका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पलाई हराउँदै अमेरिकाको ४६ औं राष्ट्रपतिमा बाइडेन निर्वाचित भएका हन्। सिएनएनले पेन्सिलभेनिया राज्यमा उनले जितेको प्रोजेक्सन गर्दै बाइडेनले निर्वाचन जितेको जनाएको छ। सन् १९०० यता सबैभन्दा बढी मतदान भएको निर्वाचनमा बाइडनले सात करोड ३० लाखभन्दा बढी मत प्राप्त गरेका छन् जुन कुनैपनि अमेरिकी राष्ट्रपतिले हालसम्म प्राप्त गरेको मतभन्दा बढी हो।